Vosọpụrụ ụbọchị nke ụbọchi nsọ: Ilblogdellafede
Ezi ofufe n'oge a: ido mmadụ nsọ
1. Steeti ọ bụla nwere ọrụ nke ya. Onye ọ bụla maara ma kwuo ya, mana, olee otu esi atụ anya ya? Ọ dị mfe ịkatọ ndị ọzọ, nwa na-enupụ isi, nwanyị na-adịghị arụ, ohu na-adịghị arụ ọrụ, na ndị na-anaghị eme ihe ha ga-emerịrị; mana ị na-eche n’obi gị: ị na-arụ ọrụ gị? Na steeti ahụ Providence nyere gị, dịka nwa nwoke, nwanyị, nwata akwụkwọ, nne, onye kachasị elu, onye ọrụ, onye ọrụ, ị na-emezu ọrụ gị niile site n'ụtụtụ ruo anyasị? Can nwere ike ịsị ee n'ezoghị ọnụ? You na echere gi oge niile?
2. Iwu ga na-eche gị nke ọma. Ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma ịrụ ọrụ na whim, site n'ịgwagharị, n'ụzọ ọrụ. Yabụ: 1 / ka anyị jiri obi anyị niile rụọ ọrụ anyị; 2 Celsius anyị na-ahọrọ ihe dị mkpa na ihe nweere onwe ya, ọ bụ ezie na nke zuru oke; 3 ° anyị anaghị arụ ọrụ azụmaahịa nke ekwekọghi na ahụike ebighi ebi, ma ọ bụ nke a na-egbochikarị; 4 ° anyị adịghị emebi iwu ọ bụla, n'agbanyeghị na ọ dị obere. You na-eji iwu ndị a?
3. Ido oke nke onye obula. Ọ bụ otu ihe ịrụ ọrụ nke ọma na nke mmadụ, ọ bụ ihe ọzọ ịrụ ọrụ n'ụzọ dị nsọ. Ọbụ onye Turk; onye Juu, onye China nwere ike rụọ ọrụ ya nke ọma, mana kedu uru ọ baara mkpụrụ obi ya? Obere ihe obula bara uru maka idi nso, rue mgbe ebighebi, ma oburu: 1 ° emere ya n’amara Chineke; 2 Celsius ma ọ bụrụ na e mere ya iji nye Chineke otuto Site na iji ụzọ abụọ a, lee ka o si dị mfe ịdị nsọ, na-enweghị ndụ pụrụ iche! Chee echiche banyere ya…
EGO. - merie umengwụ niile dị na ọrụ gị. Na nsogbu sị: Maka nke Chukwu.
← Na post gara aga Gara aga post:Ọgọstụ 5, ncheta ọmụmụ Nwanyị nwanyị anyị, anyị na-achọ gị mma n’ekpere a
Ọzọ Post → Post ozo:Nraranye nke Basilica nke Santa Maria Maggiore, Saint nke ubochi nke August 5